माइतीघरमा उभिएर प्रणालीसँग गुनासो गरिरहेका ‘एक्ला’ डाक्टर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फ्रन्टलाइनरको दुखेसो –‘हाम्रो श्रमको मूल्य खोइ ?’
‘म यहाँ आएको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हो । म एक्लो व्यक्तिले केही फरक परोस् वा नपरोस् । म आफ्नो अधिकारका लागि लड्न आएको हुँ ।’
चैत्र २०, २०७७ बुनु थारु
९ महिनादेखि सिभिल अस्पतालको युरो डिपार्टमेन्टमा मेडिकल अफिसरको रुपमा कार्यरत डा. मलिक यसअघि वीर तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि काम गरिसकेका छन् । कोरोना स‌ंक्रमण सुरु भएको बेला उनी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत थिए । उनले सिभिलमा मात्रै होइन, शिक्षण अस्पतालमा पनि कोभिड भत्ता पाएनन् ।
उनी दैनिक आफ्नो ड्युटी सकाएर माइतीघर आइपुग्छन् । छेउको हेल्मेट र बाइक देखाउँदै भन्छन् –‘ड्युटी तालिका मेरो गोजीमा हुन्छ । इमरजेन्सी पर्‍यो भने म कुदिहाल्छु । ड्युटीमा असर नपारी आवाज उठाउन यहाँ आएको हुँ ।’
कोरोना महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिनुपर्ने त्यसमाथि श्रमको मूल्य नपाउँदा उनको मन पोलिरहेको छ । हरेक दिन श्रम शोषण भइरहेको छ भनेर पीडाबोध हुन्छ । डा. अजित भन्छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हो । म एक्लो व्यक्तिले केही फरक पारोस् वा नपारोस् । म आफ्नो अधिकारका लागि लड्न आएको हो ।’
माइतीघरमा यसरी धर्ना बस्नेबारे उनले कसैलाई भन्न आवश्यक ठानेनन् । सञ्‍चारमाध्यम र सामाजिक सञ्‍जालमा तस्बिर देखेपछि दिनमा एक/दुई जना उनीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आइपुग्छन् ।‘हिम्मतका साथ न्यायका लागि लडिरहेको छुँ। म कुनै संस्थासँग आएको होइन । कसैले मलाई केही भन्लान् भन्ने लागेन । आफूमा हिम्मत थियो र छ पनि,’ उनी भन्छन् ।
दैनिक कम्तीमा २ घण्टा धर्नामा बस्छन् अनि जान्छन् । कोभिड भत्ता नपाउनुमा अस्पतालसँग कुनै गुनासो छैन उनलाई । उनलाई गुनासो छ त प्रणालीसित,‘महिनाभरी ज्याला गर्छु र सरकारलाई कर तिर्छु । मेरो माग जायज छ । यति बोल्ने मेरो अधिकार हो ।’
दिनभर अस्पतालको काम, त्यसमाथि माइतीघरमा ८ दिनदेखिको उभ्याइले थकित देखिन्थे उनी । कसैले पानी ल्याइदिएर त कसैले 'थम्ब्स अप' मार्फत उनको मागप्रति समर्थन गर्छन् । बटुवाका यी हौसलाले पनि थकान मेटिएको अनुभव गर्छन् डा. अजित ।
‘एक्लै धर्ना बस्दा कोभिड भत्ता पाइएला त ?’ उनी भन्छन्, ‘आवाज उठाउन ठूलै समूह चाहिन्छ भन्ने छैन । म एक्लै भए पनि लडिरहेछु । मैले भत्ता पाउँला वा नपाउँला एक ठाउँमा छ तर मैले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएको हुँ । ’
महामारीको समयमा यसरी श्रमशोषित हुनु आम स्वास्थ्यकर्मीको साझा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘सायद मैले मात्र नपाएको हो कि अरुले पनि भत्ता पाउनु भएको छैन होला । अरु पनि श्रम शोषित हुनुभएको छ । बोल्न नखोज्नु भएको होला,’ उनी दुःखेसो पोख्छन् । उनका अनुसार आफ्नो पक्षमा उभिन नसक्नु पनि अपराध नै हो । श्रम शोषित हुनु पनि अपराध नै हो । नबोल्नु पनि अपराध नै हो ।
आजसम्म उनलाई धर्नामा साथ दिन अस्पतालका सहकर्मी कोही पनि आएका छैनन् । बाहिरी जिल्लाबाट उनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन भने एक /दुई जना आउने गरेका छन् । एक जना डाक्टर त काभ्रेपलाञ्चोकबाट नै आएकी रहिछिन् ।
सधैँ सडकमा अजितलाई उभिएको देख्दा चिसो लाग्ला भनेर छेवैको पसलको बहिनीले तातो पानी ल्याइदिने गर्छिन् । ‘मानवता अझै छ तर सरकारमा रहनेछ । हामीप्रति संवेदनशील हुन सकेन,’ उनी भन्छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले महामारीमा अहोरात्र खटिएर बिरामीको सेवामा लागिरहँदा पनि श्रमको कदर नगरिएको उनको गुनासो छ । ‘नेपाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरु बाटोमा आउनुपर्छ । उनीहरुको कुनै सम्मान छैन । अझैसम्म मागको कसैले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुभएको छैन,’उनी आक्रोश पोख्छन् ।
महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा उभिनेलाई बेवास्ता गरिएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, ‘कसैले मेरो छोराछोरी डाक्टर छ भनेर भन्छन् भने गर्व नगर्नुहोला किनकी योभन्दा हेपिएको र श्रमशोषित कोही छैन । यो पेसामा खुसी छु भनेर कसैले भन्दैन ।’
असोजतिर उनी आफैलाई पनि कोरोना संक्रमण भयो । ‘कोरोनाको पहिलो लहर हुँदा बाँचियो, दोस्रो लहर आउँदैछ मरेर जाउँला , केही फरक पर्दैन तर आवाज उठाएर गएँ भन्ने हुन्छ,’ डा. अजित भन्छन्–‘जुलुस वा ठूला आन्दोलनमा मान्छे मर्दा सहिद हुन्छन् तर हामी मावनताको उपचार गर्दागर्दै मर्‍यो भनेर कसैले वास्ता गर्दैन ।’
‘मेरो पैसा अहिले दिनुस् म अहिले घर जान्छु । मैले पैसाका लागि लडेको होइन मेरो अधिकारको लागि लडेको हो,’ धर्ना सकेर फर्कंदै गर्दा उनले भने ।
महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर पनि भत्ता नपाउनु डा. अजितको मात्र समस्या होइन । देशैभरका स्वास्थ्यकर्मीका आवाज बनेका उनको यो खबरदारी ८औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि कसैले सुनेका छन् ।
सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. विद्यानिधि पौडेलले कोभिड भत्ता नपाउनु यो सबैको सामूहिक समस्या रहेको बताउँछन् । निर्देशक पौडेल भन्छन्,‘उहाँलाई मात्र भत्ता नदिइएको होइन । पैसा नै छैन भने कहाँबाट दिने? सरकारले पैसा छुट्याएको छ तर त्यसले सामान किन्नुपर्‍यो । हामीले आफै कमाएको पैसाले तलब दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समस्या भएको हो ।’
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ १४:५९
‘दोस्रो लहरको कोरोना बढ्न सक्छ, सतर्कता अपनाऔं’
चैत्र ११, २०७७ बुनु थारु
काठमाडौँ — पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिइरहँदा नेपालमा पनि खतराको संकेत देखिन थालेको छ । मंगलबारमात्रै भारतमा थप ४७ हजार २ सय ८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै मंगलबार भारतमा थप २ सय ७६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
महामारीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै भीडभाड, जुलुस, सभा–सम्मेलनलगायत गतिविधि बढ्नु, बजार, कलकारखानालगायत सबै क्षेत्र निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनुले पनि संक्रमणको दर बढ्दै जान सकिने देखिएको छ । फ्रान्स, इटली, स्कटल्यान्ड, युक्रेन ,जर्मनी लगायतले संक्रमण बढेको भन्दै लकडाउन पुन: सुरु गरिसकेका छन् । चैत ११ गते नेपाल सरकारले गरेको देशव्यापी लकडाउनको एक वर्ष पुगिरहँदा पुन: महामारी फैलिने संकेत देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत सोमबारदेखि १२ हजार ४६६ पीसीआर परीक्षणमा ४८३ पुष्टि भएकोमा २६६ संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । बुधबार ३ हजार ९६३ पीसीआर परीक्षणमा १४५ जना कोरोना पुष्टि भएका छन् भने १ हजार १८२ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
‘एक वर्षको अवधिमा पाठ सिकेका छौं, त्यसलाई अपनाऔं’
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी नाकामा एकदम कडाइ गर्नुपर्ने र नाकामा परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्था भए नेपालमा संक्रमण रोक्न कठिन नभएको बताउँछन् । डा. मरासिनी भन्छन्–‘संक्रमित कम भयो भन्दैमा अहिले धेरैले सावधानी अपनाएका छैनन् तर त्यो होइन ।’ उनले खोप लगाएका व्यक्तिले पनि हेल्चेक्र्याइँ गरिरहेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सुझाउँछन् ।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्–‘हामीले फेरि कोरोनाको संक्रमण धेरै बढ्न नदिन के गर्ने भन्नेमा ज्ञान भइसकेको छ । भाइरसको प्रकृति कस्तो रहेछ भनेर लगभग थाह भइसकेको अवस्था छ ।’ उनले पहिलाको कमजोरीलाई सुधार्नु पर्ने भन्दै भयावह स्थिति आउन नदिन सर्तकता अपनाउनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदी पनि स्वास्थ्य संयन्त्र चुस्त भए कोरोना संक्रमण धेरै फैलिन रोक्न सकिने बताउँछन् । डा सुवेदी भन्छन्–‘पहिलो पटक भाइरस आउँदा विश्वभर नै अन्योल थियो नेपाल पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । अहिले हाम्रो परीक्षण तथा प्राविधिक दक्षता छ । कसरी महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने धेरै थाह भइसकेको अवस्था छ ।’
उनले क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन बलियो पार्नका लागि सरकारसित विकल्प रहेको बताउँदै महामारीले भयावह नै हुने र लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था नआउने जिकिर गर्छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य विभागमा कार्यरत डा. अर्चना श्रेष्ठका अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकाले नेपालमा पनि केही हप्तामा नै संक्रमणको संख्या बढ्दै जान सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । भन्छिन्,‘दोस्रो चरणको कोरोना महामारी न्यूनिकारण लागि सबै सतर्क हुनुपर्छ । विशेषगरी दीर्घ रोग भएका व्यक्तिले सावधानी अपनाउने र शंका लागेमा तुरुन्त जचाउनुपर्छ ।’
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनलाई तयार राख्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्डसमेत अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कोरोना संक्रमितको सख्ंया उच्च हुन गएमा संक्रमणको चक्र रोक्नका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने बताउँछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मानिसहरुले अनावश्यक भीडभाड बढ्नु, मास्क नलगाउनु, सामाजिक दुरी कायम नगर्नु, भेटघाट तथा गोष्ठी बढ्नुले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् ।
‘लडकाउन गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य होइन तर सरकारले परिस्थितिअनुसार नीतिगत निर्णय गरेर संक्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने हुन्छ र संक्रमणलाई भयावह रुपमा फैलिन नदिन सजग हुनुपर्छ ’ डा. समीर भन्छन् । उनले आउँदै गरेको होली घरमै बसेर मनाउन र अनावश्यक भीडभाड नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ २१:४४